न्यूज सञ्जाल: » महिनामा दर्जन गोल्डकप, भद्रगोल तालिका !
महिनामा दर्जन गोल्डकप, भद्रगोल तालिका !
न्यूज सञ्जाल १७ पुष २०७६, बिहीबार १५:३९
काठमाडौं । दुई महिनामा २५ वटा फुटबल प्रतियोगिता। सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ। तर, वास्तविकता यही हो। यस्ता प्रतियोगिताले नेपाली फुटबललाई धानेका त छन्, तर यिनलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले व्यवस्थित बनाउन नसक्दा ‘भद्रगोल’ हुने गरेका छन्।
पोखराको आहा रारा, इलामको माइभ्याली, सुनसरीको बुढासुब्बा, बुटवलको तिलोत्तमा गोल्डकप र पछिल्लो समयमा आएका बाराको सिमरा गोल्डकप, झापा गोल्डकप, धनगढीको खप्तड गोल्डकप जस्ता प्रतियोगिताले नेपाली फुटबल धानेको थियो र छ पनि। अझ सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक नबनाइञ्जेल नेपाली फुटबल यस्ता ‘गोल्डकप’ मै भर पर्नुपर्ने निश्चित छ।
तर यिनै गोल्डकपलाई पनि एन्फाले व्यवस्थित र स्तरीय बनाउन सकेन। केही दिनअघि मात्रै एन्फाले सार्वजनिक गरेको मोफसलका प्रतियोगितामा २५ वटा गोल्डकप समावेश छ। तर यी प्रतियोगिता २ महिनामै सकाउनु पर्ने गरी एन्फाले मिति पनि सार्वजनिक गरेको छ।
मोफसलमा धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगिता हुनु नेपाली फुटबलकै लागि राम्रो हो। तर एन्फाले सार्वजनिक गरेको २५ गोल्डकपको सन्दर्भमा भने दुःखी हुनु की खुसीरु एन्फाका प्रतियोगिता संयोजक विजय घले भने प्रतियोगिता जुधाएर गर्दा नै सबै क्लबलाई फाइदा पुग्ने तर्क गर्छन्।
‘हामीले प्रतियोगिताको मिति जुधाएरै निकालेको हो। ५–६ वटा क्लबलाई मात्रै प्रतियोगिता खेल्न बोलाउने भयो। अरु टिमको सहभागिता रहेन,’ उनी थप्छन्, ‘प्रतियोगिता जुधाएर मिति तोक्दा ए डिभिजनका सबै क्लबले खेल्न पाउने भए। पहिलेको जस्तो मनाङ, थ्रीस्टार, आर्मीमात्रै भन्ने भएन।’ मोफसल प्रतियोगिताका बारेमा एन्फाले दिएको जवाफले नै यस विषयमा कति गम्भीर छ भनेर प्रस्टै देखिन्छ।
स्वार्थमा छोपिएको हो फुटबलको नयाँ युग ?
कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वले फुटबल परिवर्तनको नारा लिएर एन्फाको बागडोर सम्हालेको पनि २ वर्ष पूरा हुन लाग्यो। ग्रासरुटदेखि नै विकास गर्दै नेपाली फुटबलमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने दाबी गरेका कर्माछिरिङ नेतृत्वले यतिबेला भने ‘छेपारो’ले जसरी रुप फेरेका छन्।
चुनावी मैदानमा उत्रिँदा उनले फुटबलमा देखाएका सपना ओझेलमा परेको छ। लामो समयसम्म एन्फाका निलम्बित पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाविरुद्ध पारदर्शिताको कुरा उठाउँदै आएका परिर्वतन पक्षप्रति विस्तारै आक्रोस पोख्नेको जमात पनि बढ्दो छ।
लिग र गोल्डकपलाई व्यवस्थित गर्न एन्फा अझै पनि चुकिरहेको छ। उचित मापदण्ड विना नै धेरै गोल्डकप आयोजना गर्न अनुमति दिनु र भद्रगोल खेल तालिका सार्वजनिक गर्नु एन्फाको अर्को अपरिपक्क निर्णय हो।
काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष विराटजंग शाही भन्छन्, ‘मेसिनलाई त विश्राम चाहिन्छ भने खेलाडीलाई विश्राम चाहिदैन ? २ महिनामा २५ वटा प्रतियोगिता कसरी खेल्ने ?’
छैनन् स्तरीय गोल्डकप
मोफसलमा हुने गोल्डकप फुटबलबारे एन्फासँग प्रष्ट नीति छैन। पछिल्लो समयमा त च्याउसरी उम्रिएका छन् गोल्डकपहरू। तर यसलाई व्यवस्थित र स्तरीय बनाउन एन्फासँग न त वैज्ञानिक मापदण्ड नै छ न प्रभावकारी नीति।
पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्म आयोजना हुने गोल्डकपहरुमा ए डिभिजन लिगका टिमहरुले नै खेल्ने हुन्। विभागीय ३ टिम (आर्मी, पुलिस र एपीएफ) ले त मोफसलका प्रतियोगिताहरु छुटाउने नै भएनन्।
त्यस्तै, मनाङ, थ्रीस्टार, संकटा, मछिन्द्र, च्यासल युथ क्लब, न्यु रोड टिम (एनआरटी), हिमालयन शेर्पा क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, जावलाखेल युथ क्लब, सरस्वती युथ क्लब र ब्रिगेड ब्वाइज क्लब क्लब त आयोजकलाई दर्शक तान्नका लागि भए पनि चाहियो, चाहियो।
दर्शकले नाम चलेका खेलाडी ताक्छन्, आयोजकले क्लब। तर यहाँ मैदान, ड्रेसिङ रुम र अन्य भौतिक संरचना हेरिँदैन। मोफसलका गोल्डकप नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडी नै हुन्। कतिपय गोल्डकपका मैदान धुलाम्यदेखि हिलाम्यसम्मका थिए। यस्तै खालका मैदानमा प्रतियोगिता खेलाइयो।
थुप्रै उदाहरण छन्। स्तरहीन मैदानमा खेल्दा खेलाडीको खुट्टा, हात भाँचिएको अनि काँधको हड्डी खुस्किएको। तर फुटबलको नियमनकारी निकाय एन्फा आँखा चिम्लिएर बस्छ।
यता, प्रतियोगिताका संयोजक घले भने झनै खेलाडीका लागि फाइदा पुग्ने बताउँछन्। ‘खेलाडीलाई मर्का पर्दैन। खेलाडीकै हितमा छ। ७–८ वटा प्रतियोगितामात्रै एउटा क्लबले खेल्छ।’
एन्फाले सार्वजनिक गरेको खेल तालिकाअनुसार फागुन १ देखि १० गतेसम्म पोखरामा मनकामना गोल्डकप, झापामा सताक्षी गोल्डकप र मकवानपुरमा बागमति गोल्डकप आयोजना हुनेछ। यो तीनै प्रतियोगिता सुरु भएको २ दिनपछि मात्रै सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग सकिँदैछ।
मोफसलको प्रतियोगिता खेल्ने भनेको नै ए डिभिजन क्लबहरुले हो। त्यहीमाथि एउटै मितिमा ३ वटा प्रतियोगिता जुधाउँदा यसको स्तर र प्रभाव कस्तो हाला ?
मनकामना गोल्डकप, सताक्षी गोल्डकप र बागमति गोल्डकप सकिन ५ दिनअघि नै फागुन ५ देखि १५ सम्म चितवनमा राइनो गोल्डकप आयोजना हुनेछ। एन्फाले यतिमात्रै हैन फागुन ५ देखि १७ गतेसम्म बुटवलमा तिलोत्तमा गोल्डकप र धरानमा बुढासुब्बा गोल्डकपजस्ता चर्चित मोफसल फुटबल प्रतियोगिताको मिति जुधाएको छ। यसलाई कसरी उपयुक्त र सान्दर्भिक कार्यतालिका मान्ने ?
यतिमात्रै हैन। अगाडिका राइनो गोल्डकप, बुढासुब्बा र तिलोत्तमा गोल्डकप नसकी फागुन ११ देखि २२ गतेसम्म धनगढीमा खप्तड गोल्डकप हुनेछ। भद्रगोल तरिकाले निकालिएको खेल तालिका झनै अर्को उराठलाग्दो मिति हो, फागुन १५ देखि २४ गतेसम्म झापामा झापा गोल्डकप, इलाममा माईभ्याली गोल्डकप र बाग्लुङमा मेयर गोल्डकप आयोजना हुने छन्।
अगाडिका २–३ वटा प्रतियोगिता नसकी नै फेरि अन्य २–३ वटा प्रतियोगिता आयोजना हुनेछ। फागुन २२ देखि चैत्त १ सम्म पोखरामा आहा रारा गोल्डकप, सर्लाहीमा राजर्षी जनक गोल्डकप र वीरगञ्जमा विशाल मेमोरियल गोल्डकप हुनेछन्। त्यस्तै, फागुन २४ देखि नै चैत्त ३ गतेसम्म नेपालगञ्जमा नेपालगञ्ज गोल्डकप, चितवनमा भरतपुर गोल्डकप र धनगढीमा तेस्रो सुदूरपश्चिम गौरी गंगा गोल्डकप हुने छन्।
चैत ६ देखि १५ सम्म सिमरामा सिमरा गोल्डकप र सुनसरीमा मदन भण्डारी गोल्डकपको मिति तय भएको छ। चैत १३ देखि २२ सम्म सिन्धुपाल्चोकमा सिन्धु गोल्डकप, काभ्रे गोल्डकप र सुनसरीमा भरत गोल्डकप आयोजना हुनेछ।
त्यस्तै, चैत २० देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा एन्फा नक आउट प्रतियोगिता हुनेछ भने चैत्त २७ देखि बैशाख ६ सम्म झापामा मेचिनगर गोल्डकप आयोजना हुनेछ।
‘यसको सिधै असर खेलाडीमा पर्छ। विभागीय टिमलाई अरु टिमको तुलनामा ठिकै होला तर अरु क्लबका खेलाडी त मर्ने भइहाले नि। कसरी खेल्न सक्छन् खेलाडीलेरु’, काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष शाही प्रश्न गर्छन्।
यसरी मनपरी मोफसलको प्रतियोगिताको मिति तोकिदा एन्फालाई फाइदा होला तर, यस्ता औचित्यहीन खेल तालिका सार्वजनिक गर्दै प्रतियोगिता आयोजना गर्दा न त प्रतियोगिताले राम्रो छाप नै छोड्न सक्छ न खेलाडीको विकास नै हुन्छ। हुन त एन्फाबाट यस्ता झारा टार्ने काम यो नै पहिलो पटक भने होइन। नेपाल लाइभबाट साभार